हाम्रो समय मा कार चोरी को खतरा एकदम उच्च छ, त्यसैले मोटर चालकहरुलाई को विशाल बहुमत carjacking यो असम्भव गर्नेछ, या कम से कम आक्रमणकारीले गर्न थप जटिलता सिर्जना उपाय सोच्न। यो त प्रिय चोर छ खरीद समय, मदत र आफ्नो योजना त्याग्न उसलाई बाध्य हुनेछ। यो उद्देश्य लागि, कार विरोधी चोरी उपकरणहरू को एक सम्पूर्ण दायरा, को हुड लक स्थापना समावेश गर्न सक्छन् जो सेट। जानिन्छ, हुड ठाउँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अक्सर, त्यहाँ अन्य कुराहरु छन्, र जस्तै सुरक्षात्मक उपकरण को मुख्य भागहरु, एक नियन्त्रण एकाइ र मोहिनी, त्यसैले लुटेरा कार अलार्म असक्षम रूपमा चाँडै सकेसम्म भित्र पस्नु गर्न खोज्ने। पहुँच अवरोध खडा गर्न हुड लक स्थापना।
ढक्कन ताले विद्युत र बस यांत्रिक: दुई प्रकार मा आउनुहोस्। तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको फाइदा र बेफाइदा दुवै छ। विद्युत थप जटिल बोलाउन र स्थिर कार्यका लागि बारम्बार मर्मतका आवश्यक, तर तिनीहरूले यांत्रिक भन्दा बढी विश्वसनीय छन्। विश्वसनीयता खोल्ने कुञ्जी यांत्रिक ताले प्रयोग गरिन्छ गर्दा तिनीहरूले, टाढाको नियन्त्रण संग ड्राइव संकेत को माध्यम खोलिएका छन्, र यसैले यो टक्कर मार्फत खोल्न सकिन्छ तिनीहरूलाई दिन्छ।
त्यसैले गरेको जो हुड को सुरक्षा आवश्यक मुख्य कारण, कल गरौं:
एक लुटेरा गर्न प्रयास गर्ने कार अलार्म मोहिनी अक्षम गर्न अनुमति छैन ध्यान आकर्षित गर्न ताकि, पहिलो गर्छन्। प्रायजसो, कार चोरी, अलार्म असक्षम एक असफल प्रयास मा, चोर यसको कार्यहरू रोक्छ।
यसलाई जहाँ तिनीहरूले राम्रो सानो घर भन्दा सुरक्षित हुड अन्तर्गत लक उपस्थिति स्थापित इन्जिन अनलक गर्ने मौकाको छैन।
त्यस्तो आत्म-संचालित, बहुमुखी रूपमा अपहरणकर्ताहरूलाई, प्रयोग विभिन्न उपकरणहरू को सहायता संग हुड लक, ज्वलन मोड्युल सुरु र एक कार चोरी गर्ने संभावना दिन छैन, र एक विशेष नियन्त्रण प्रणाली।
युरोपेली कार ब्रान्ड मा हुड लक स्थापना पहुँच बंद को निदान कनेक्टर, जो मार्फत एक लक श्रृंखला इन्जिन नियन्त्रण मोड्युल पनि हुड स्थित फेला पार्न र अनलक गर्न, र प्रतिस्थापन सजिलो छ।
जापानी मा ब्रान्ड कार, यस्तो निसान र Huyndai रूपमा लक गियरबक्सलाई राख्नु भने, हुड लक अवश्य छ, स्थापना गर्नुहोस्। यी कार मा गियरबक्सलाई डिजाइन तपाईं गियर लीवर लक, यो व्यर्थ स्थापना बनाउँछ जो छोएर बिना खुला हुड अन्तर्गत देखि प्रसारण सक्षम गर्न अनुमति दिन्छ।
हुड अन्तर्गत स्थापित Monoblock कार अलार्म बस जसबाट अलार्म सिस्टम असक्षम, प्रमुख वा cranking लार्वा monoblock संग बन्द गर्न सकिन्छ।
र, को पाठ्यक्रम, हुड लक चोरी को प्रयास उहाँले कार को हुड प्राप्त गर्न सक्षम थियो भने जब चोर भागहरु र कार छलछामको गाँठो स्वार्थपूर्ति गर्न अनुमति छैन सेट।
हुड मा लक स्थापना गर्न, हामी एकदम जटिल प्रक्रिया, साथै कार को एक विशेष ब्रान्ड को लागि आफ्नो चयन छ रूपमा, व्यवसायीक बारी गर्न सल्लाह थियो। पेशेवरहरुको लागि सुरक्षित, तपाईं बस लक को घरेलु स्थापना सुरक्षाको कार र चोर लागि समस्या को एक न्यूनतम को मात्र उपस्थिति सिर्जना किनभने कार गुमाउन सक्छ।
कूलेंट तापमान गेज: स्थान, निरीक्षण, प्रतिस्थापन
यो कार मा Smells। यसको उपस्थिति को मुख्य कारण: कार मा पेट्रोल को गन्ध
"ओपल-Astra": दिग्गज जे-श्रृंखला वाहन को 4th पुस्ता को मालिक को एक समीक्षा
के नर्सरी लागि ठंडे बस्ते हुन सक्छ?
लारा Dinc4* - आफ्नो भन्दा राम्रो विकल्प
पक्रने मछली जाडो
नयाँ विचार - बनाउन कार ट्युनिङ
चेस टुक्रा - विजेता दर्शन
Hypokinesia - यो के हो? Hypokinesia: परिभाषा, प्रकार र उपचार
अस्पताल (Svaliava, Zakarpattia): "Kvitka Poloniny", "सनी Transcarpathia", "Krishtaleva dzherelo"। युक्रेनमा उपचार र आराम
Intangible सम्पत्ति परिशोधन